Ergeyga Q/Midoobay ee Somaliya oo Baaq kasoo saaray xaaladda Xoriyadda Saxaafadda | SMC
Home WARARKA MAANTA Ergeyga Q/Midoobay ee Somaliya oo Baaq kasoo saaray xaaladda Xoriyadda Saxaafadda
Ergeyga Q/Midoobay ee Somaliya oo Baaq kasoo saaray xaaladda Xoriyadda Saxaafadda
Waa in sidaas xaaladdu ahaato mar walba, gaar ahaan xilligan lagu jiro oo Soomaaliya ay isku diyaarinayso doorashooyinkeeda qaran ee ‘qof-iyo-cod’ ah. Tani waa munaasabad taariikhi ah oo u baahan waax warbaahineed oo firfircoon, xor ah oo bed-qabta, taas oo awood u leh inay wararka usoo tabiso si cabsi la’aan iyo eex la’aan ah,” ayuu raaciyay.
“Maadaama dalku uu la tacaalayo cudurka saf-mareenka ah ee COVID-19, ayaa baahida loo qabo in warbaahintu soo tebiso warar sugan oo waqtigooda kusoo beegma ayaa sidoo kale ah arrin muhiim ah oo gacan ka geysanaysa kor u-qaadista wacyiga, taas badbaadin kara nolosha dadka.”
Maalinta Xorriyadda Saxaafadda Adduunka waxaa looga dan leeyahay in lagu xuso laguna difaaco mabaadi’da asaasiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Waxaa la xusaa sanad kasta 3da Maajo, waxaana halkudhigga Maalinta sanadkan uu yahay “Saxaafad aan lahayn Cabsi ama Eex,” iyadoo halkudigga faaf-faahsan uu yahay sidan: bed-qabka haweenka iyo ragga suxufiyiinta ah, saxaafad madaxbanaan oo xirfad leh oo ka caaggan saamayn siyaasadeed iyo mid dhaqaale, iyo sinnaanta jinsiga ee dhammaan dhinacyada warbaahinta.
Previous articleXog isweedaarsi dhaxmaray Alshabaab iyo NISA oo lagu dilay marxuum yaasiin muxumed
Next articleAmiirka Qatar oo amray in Deeq Qalab Caafimaad loo soo diro Soomaaliya